RentHelpMN way u furantahay arjiyada.
RentHelpMN mardambe ma aqbalayso arjiyada.
Waa maxay RentHelpMN?
Barnaamijkan waxaa loo sameeyay in lagu caawiyo kiraystayaasha Minnesota ee halis ugu jira inay waayaan guryahooda sababo la xiriira aafada cudurka COVID-19, iyo in dib loogu celiyo mulkiilayaasha guryaha lacagihii kirada ee seegay. Haddii aad la dib dhacday kiradaada, waxaanu halkan u joognaa inaan ku caawino. Ogoow haddii aad u qalanto oo maanta billow arjigaaga.
Haddii aad soo gudbisay arji January 28 ama kahor, dib u eegis ayaa lagu samayn doonaa. Codsiyada u qalma waa laga shaqayn doonaa iyadoo ku xiran in loo heli karo maalgelin.
Miyaad raadinaysaa kaalmada kirada ama adeegyada guriga?
Kaalmada adeegyada guriga ayaa waxa la heli karaa iyada oo loo marayo Barnaamijka Kaalmada Tamarta (Energy Assistance Program). Codso May 31, 2022.
Hoos u dhaadhac si aad u hesho link-yada khayraadka bulshada oo dheeraad ah
RentHelpMN waa ka hortaga ka Saaritaanka Guriga
Haddii aad tahay kireyste wajahaya in laga saaro guriga kirada oo aad bixin wayday darteed, haysashada arjiga gargaarka kirada xaaladaha degdega ah oo sugayaa waa ilaalin. Kiraystayaasha hela ogeysiiska ka saarida gurigu waa in ay wali ka jawaabaan oo ay horyimaadaan maxkamada si ay u muujiyaan cadaynta in ay codsadeen. Shaqaale ka socda Guriyeynta Minnesota ayaa waxay joogaan dhegaysiyada maxkamada si ay u siiyaan macluumaad dhammaan dhinacyada. Ka ogoow wax badan oo ku saabsan habka guri ka saarida iyo sida loo difaaco naftaada homelinemn.org.
Kireystayaasha Minnesota ee u qalma waxay u heli karaan caawinta kirada iyo biilasha korontada ee la taariiqeeyay Maarso kadib 13, 2020. Haddii aad u qalantid, waxaad heli kartaa illaa 18 bilood caawin guud.
Lacag Bixinada Kirada
Kirada waqtigeeda la dhaafay tan iyo Maarso 13, 2020 (kirada Abriil 1) iyo kirada imaaneyso, sadex bilood waqtigiiba.
Liiska hubineed ee kiraystaha
Dajiso Liiska warbixinta Kireystaha PDF si aad u aragtid haddii aad u qalantid oo ogow dokumintiyadee ayaad u baahaneysaa si markaas aad diyaar ugu noqotid codsashada.
Liiska hubineed ee mulkiilaha
Ka dajiso Liiska hubinta Milkiilaha PDF si aad u aragtid haddii aad u qalantid oo ogow dokumintiyadee ayaad u baahaneysaa si markaas aad diyaar ugu noqotid codsashada.
Yaan ugu yeeri karaa su'aalaha? Howlwadeenada tababaran ayaa loo heli karaa inay ka jawabaan su'aalahaaga ku saabsan u qalmidaada, biilasha, dokumintiyada ama si loo sameeyo hoy macquul ah. Soo wac 211 maanta.
Haddii aad tahay kireyste ku nool Minnesota ee buuxiyo sharuudaha u qalmida, waxaad codsan kartaa RentHelpMN.
KIREYSTAYAASHA: HADEER CODSO
Ma tahay milkiile leh kireystayaal ka dib dhacay kirada? RentHelpMN waa fursad cusub oo lagu bixinayo kirada aad qabtid.
MILKIILAYAASHA: IS DIIWAANGELI HADEER
Illaha kale ee la heli karo
Shirkado badan ee helay lacagaha guriga iyo caawinta la xiriirto sida ka qeyb ah lacagaha deeqda COVID-19.
Maamulada Qabiilka qaarkood waxay helaan maalgelinta faderaalka si ay ugu howlgalaan barnaamijyadooda caawinta kirada. Haddii aad ugu xirantahay adeegyada dhinaca Qabiilka ee Minnesota, si toos ah kala xiriir iyaga wixii warbixin dheeraad ah.
Ma u baahantahay codsiga warqada? Dajiso PDF la daabici karo ama isticmaal PDF ka isku darka la buuxin karo. Fasiraada codsiga iyo websaydkaan ayaa dhawaan lagu helayaa af Isbaanish, Homong iyo Soomaali.
Daawo siminaarka Guriyeynta Minnesota si aad wax badan uga baratid RentHelpMN iyo sida loogu diyaar garoobo codsashada.
Caawinta milkiilaha guriga wadada ayay ku soo jirtaa. Iska diiwaangeli aqbaaraha i-meelka ee caawinta lacagta guriga.
Haddii aad rabtid inaad la hadashid la taliyaha milkiilaha guriga aan faa'ido doonka aheyn oo kugu caawin karo qorsheynta xaaladaada, la xiriir Xarunta Milkiilaha guriga Minnesota.
Ku caawi qarashaadka kululeynta iyo dayactirka kululeeyayaasha waxaa laga heli karaa dhinaca Barnaamijka Caawinta Tamarta Daqliga Hoose.Codso May 31, 2022.
Xeerka Cimilada Qaboobaha ee Minnesota (CWR) aa sharci dawladeed oo ka ilaaliya macaamiisha tamarta inay xidhaan koronto ama gaas inta u dhexeysa Oktoobar 1 iyo Abriil 30.
Ku caawi qarashaadka Intarneetka waxaa laga heli karaa dhinaca Barnaamijka Isku xidhka La awoodi karo (ACP).
Haddii aad ku nooshahay Minnesota oo aad qabtid curyaannimo, Faa'idooyinka Guriyeynta 101 (websaydka waxaa lagu heli karaa af Ingiriis) waxay kugu caawin kartaa wax badan ee ku saabsan barnaamijyada iyo dooqyada taageero baahiyada guriyeyntaada iyo yoolalka.
Minnesota waxay leedahay nidaam codsasho oo la habeeyey oo loogu talagalay nacfiyada sida lacagta caddaanka ah, cuntada, guriyeynta xaaladaha degdeg ah, iyo kaalmada daryeelka ilmaha. Arjigu wuxuu ku jiraa khadka internetka waxaana lagu buuxin karaa 20 daqiiqo ama wax ka yar.
Haddii aad tahay guri la'aan, aad halis ugu jirto guri la'aan, ama aadan haysan meel aad joogi karto muddo dheer, la xiriir ‘“albaabka hore” ee Coordinated Entry’ si aad u hesho khayraad dheeraad ah.
Hay'ada adeega aadanaha ee degmada ama qabaa'ilka ayaa kaa caawin karta in lagugu xiriiriyo nacfiyada ama adeegyada kale, iyo sidoo kale gargaarka xaaladaha degdega ah.
LA WADAAG RentHelpMN BULSHADAADA
Haddii aad jeclaan laheyd inaad ku caawisid faafinta erayga ku saabsan RentHelpMN, raac linkiga hoose si aad ugu gashid qalabka qoraalada oo adiga aad isticmaashid. Kuwaan waxaa ku jiro boostiyada warbaahinta bulshada, i-meelka iyo luuqada fariimo qoraalka, boostiyada, buugyarayaasha, cayeysiinta dhijitaalka iyo wax badan.
LA WADAAG RENTHELPMN